Dagaal dhimasho iyo dhaawac gaystay oo ka dhacay tuulada Eeragoo oo qiyaastii 80km dhanka waqooyi kaga beegan degmada Buurtinle. – Radio Daljir
Abriil 13, 2010 12:00 b 0
Cagaarre, Apr 13 – Wararka ka imaanaya deegaanka Cagaarre oo qiyaastii 80 KM dhinac waqooyi kaga toosan degmada Buurtinle ee gobolka Nugaal, ayaa sheegayaa maanta halkaasi in uu ka dhacay dagaal beelood oo gaystay khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac iskugu jira.
Dagaalkaan oo sida la sheegay ka dhacay meesha lagu magacaabo Muddul-ayrogoo ayaa u dhaxeeyo labo beelood oo walaalo ah ee deegaankaasi wada deggan, kuwaasi oo hadda ka horna isla deegaannadaasi ku dagaallamay sanadkii 2007-dii.
Iska-horimaadka maanta dhacay ayaa sida la xaqiijinayo gaystay khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac iskugu jira kaasi oo soo kala gaaray labadii dhinac ee dirirtu u dhaxaysay, hase ahaatee illaa iyo haatan si rasmi ah looma caddayn karo tirada dhimasho amase midda dhaawac, waxaase jira warar hordhac ah oo sheegaya dhimashada illaa 7 qof halka dad intaasi ka badanna ay dhaawacmeen.
Goobta lagu dagaallamay ayaa ah dhul hawd ah oo aan lahayn wax isgaarsiin ah marka laga reebo fooneeyayaasha hawhawga loo yaqaanno, waxaana deegaanno dhawr ah oo ku dhaw halka lagu dagaallamay gaar ahaan tuulooyinka Carriska iyo Maygaagle oo aan la xiriirnay dad ku sugan ay noo sheegeen dagaalku in uu ahaa mid xooggan khasaaro aan yarayna gaystay.
Dagaalka ayaa sida la xaqiijiyey si iskiis ah u istaagay duhurnimadii maanta waxaana odayaasha labada dhinac ay haatan ku hawlan yahay sidii xiisaddaasi loo qaboojin lahaa, iaydoo la tilmaamayo in uu jiro hub uruursi iyo abaabul colaadeed oo hor leh.
Muranka iyo xurfugta colaadeed ee u dhaxeysa labadaasi beelood ayaa ah mid muddo soo jiitamaysay, waxayna salka ku haystaa kala shaxeexasho xagga deegaanka iyo daaqsinta xoolaha ah, iyadoo sidoo kalana ay jiraan aanooyin qabiil oo iyana muddo soo jiitamayey.
Deegaanno miyi ah oo ku dhaw tuulada maanta lagu dagaallamay ee Muddul-erogoo isla markaana ah dhul ku wanaagsan xagga daaqsinta xoolaha ayaa hadda ka hor waxaa uga dhacay dagaallo isla kuwaan la xiriiray kuwaasi oo gaystay khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac iskugu.
Intii ay bilaabatay colaadda u dhaxaysa labadaasi beelood oo ka wada tirsan maamulka Puntland waxaa ku dhintay dad ku dhaw 30 qof, kuwaasi oo dhammaantood ku geeriyooday dagaallo ka fool ka fool ah iyo dilal gaadmo ah oo muddo ku dhaw saddex sano ardaayadaasi u dhaxeeyey.
Bartamihii sanaddii 2007-da waxaa maamulka Puntland iyo issimada iyo cuqaasha beelaha deggan Puntland ah ku guulaysteen in ay heshiisiiyaan labadaasi beelood iyadoo dhammaanba xal laga gaaray dadkii dhintay, kuwii dhaawacmay iyo sidoo kale wixii sababay dagaalkooda, hase ahaatee colaaddu waxay dib u soo cuboonaatay sanadkii 2009 kaddib markii la dilay nin ka tirsanaa mid ka mid ah labada beelood taasoo sal u noqotay heshiiskii la gaaray in uu burburo.
Bishii aynu soo dhaafnay ee Maarso waxaa burburay shir nabbadeed oo la doonayey in xal looga gaaro khilaafka labadaasi beelood u dhaxeeya, taasi oo ay iclaamiyeen fidinta gogosheeda nabbadeed maamulka Puntland, issimada iyo waxgaradka dadyawga Puntland waxaana uu burburay shirkaasi nabadeed kaddib markii beel ka mid ah beelihii dagaallamay ay diiday in ay gogosha soo fariisato.
C/fataax Cumar Geeddi,
Munaasbad lagu maamuusayey maalinta dhirta Soomaaliya oo ka dhacay Galkacyo & 10,000 geed tallaal oo loo qaybiyey bulshada Galkacyo
Dawlada Puntland iyo dawlada federaalka ah ee Somaliya oo heshiis ku kala sixiixday Nairobi.